“YCA 2019”: mitady fiaraha-miasa ny “Fihariana” | NewsMada
“YCA 2019”: mitady fiaraha-miasa ny “Fihariana”
Nanatrika ny fivoriambe iraisam-pirenena ho an’ny tanora, ny “Youth Connect Africa” (YCA) 2019 tany Kigali, Renivohitr’i Rwanda, ny 9 hatramin’ny 11 oktobra teo, ny Malagasy, tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, ny Fandaharanasan’ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana (Pnud) ary ny solontena avy amin’ny fandaharanasa “Fihariana”. Fotoana niresahana ny fandraharahana, ny vehivavy sy ny zony, ny tanora.
Nambaran’ny tompon’andraikitra nasionaly ny Fihariana, i Herimanarivo Gilberto, fa “manan-danja ho an’ny fandaharanasa Fihariana ity fotoana ity satria nikarohana fiaraha-miasa amin’ny firenena afrikanina hafa hitondra fampandrosoana haingana ho an’ny tanora sy ny vehivavy aty Afrika sy aty Madagasikara”.
Ny Afrikanina ihany
Tsikaritra nandritra ity fivoriambe ity fa mifameno tanteraka ny firenena afrikanina amin’ny fifanakalozana ara-barotra, indrindra ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny teknolojia vaovao. Notsorin’ny talen’ny Fampandehanan-draharaha ny Fihariana, Andrianasolo Franck, fa “fikarohana lalambarotra ho an’ny vokatra malagasy ity fihaonambe tany Kigali ity, amoahana any ivelany ny zava-bitan’ny tanora mpandraharaha aty Madagasikara. Faharoa, ahafahana mifanakalo traikefa sy fikarohana fiofanana ho an’ny tanorantsika koa”.
Tompon-kevitry ny YCA ny filoha roandey, i Paul Kagame. Aminy, resy lahatra izy fa ny Afrikanina ihany no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fampandrosoana an’i Afrika ary fototra hitondra izany fampandrosoana izany ny tanora.
Lohahevitry ny “YCA 2019” ny hoe “Horaisiko ny andraikitra” (I take the lead). Tanjona ny hidiran’ny firenena afrikanina miisa 50 ao anatin’ity rafitra ity amin’ny taona 2024.